Shakira oo fariin qiiro leh u dirtay Gerard Piqué kadib markii uu ka fariistay ciyaaraaha caalamiga ah – Gool FM
Dajiye August 12, 2018
(Spain) 12 Agoosto 2018. Shakira ayaa barteeda rasmiga ah ee Twitter-ka ugu soo qortay fariin qiiro badan seygeeda Gerard Piqué ee ah difaaca kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain.
Gerard Piqué ayaa go’aansday inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah, kadib waayo qurux badan uu ku soo qaatay wuxuuna fariintan ku sheegay kadib markii uu kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Spanish super cup ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Sevilla.
“Waxaan gaaray go’aan aan ka fikirayay mudo fog, waxaan ku soo guuleestay koobka aduunka iyo euro”.
“Waxaan haatan doonayaa inaan diirada saaro kaliya kooxda Barcelona, waxaan kusoo raaxeestay waayaheyga xulka qaranka Spain”.
Hadaba Shakira ayaa barteeda rasmiga ah ee Twitter-ka kusoo qortay “Dhamaadka marxaladda cajiibka, ee xili kasta baaqi ku noqoneysa qalbiyadeena, waqtiyadii ugu fiicnaa nolosheyda wuxuu ayaa ahayd markii aan kugu arkay xulka qaranka Spain Koobka Aduunka ee sanadkii 2010
Pique ayaa xulka qaranka Spain u saftay 103 kulan, wuxuu dhaliyey 5 gool, wuxuu sameeyay 3 gool caawin, wuxuu qaatay 14 jaale iyo 1 kaarka cas.